Shandisa CCI zvakanaka mune email
Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 12, 2022 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Unogona kupedza makore uchitumira meseji ne tsamba pasina kumboita nezve "CCI". Nekudaro, kana iyo email ikashandiswa mune yehunyanzvi marongero, kuziva kwayo kwayo uye kushandiswa kwayo chinhu chinodiwa. Izvi zvinoita kuti zvikwanise kuishandisa zvine hungwaru. Nokudaro, kana mutumiri uye zvikamu zvemugamuchiri pamusoro wepamusoro zvinonzwisisika nyore. "CC" zvinoreva kabhoni kopi uye "CCI" zvinoreva isingaonekwe kabhoni kopi, ishoma. Uyezve, vashandisi vazhinji havazive kuti iyi acronym inomutsa chii.
Ko iro bofu kabhoni rinorevei?
Iyo kabhoni kopi inogona kuonekwa semutero kune yechokwadi kabhoni kopi yaivepo isati yasikwa yekukopa uye iyo yakabvumira kuchengeta replicas yegwaro. Zvakafanana nepepa rakapetwa kaviri rinoiswa pasi pepepa guru uye rinotora zvose zvaunonyora paunenge uchienda. Inoshandiswa zvakanyanya pakudhirowa senge zvinyorwa. Saka inoiswa pakati pemapepa maviri, ayo ari pazasi zvachose, achange ari kopi yeari pamusoro. Kana nhasi tsika iyi isingachashandiswa zvakare nekuuya kwehunyanzvi hutsva. Mabhuku ezvinyorwa anoshandisa iyi system anogara achigadzira invoice nemakopi.
Iko kushandiswa kweCCI
Iyo "CCI" inokutendera kuti uvanze vanokugamuchira mu "Ku" uye "CC" paunotumira boka. Izvi zvinotadzisa mhinduro dzevamwe kuonekwa nevamwe. Saka iyo "CC" inoonekwa seyakafanana inoonekwa nevose vanogamuchira uye neanotumira. Nepo iyo "CCI", sekureva kunoita izwi rekuti "asingaoneki", inodzivirira vamwe vanogamuchira kuona avo vari mu "CCI". Munhu anovatumira chete ndiye achakwanisa kuvaona. Izvi zvakakosha kune basa, kana iwe uchida kuenda nekukurumidza, pasina mhinduro dzinoonekwa kune wese.
VERENGA Sarudza magumo akakodzera emutsara weemail, asi unoita sei nezvazvo?
Sei kushandisa CCI?
Nekutumira email mu "CCI", vanogamuchira muchikamu chino havambo oneka. Saka, kushandiswa kwayo kunogona kukurudzirwa nekuremekedza data yega. Chii chakakosha munharaunda yehunyanzvi. Chokwadi, iyo email kero chinhu chinoumba chemunhu data. Sezvakangoita nhamba yefoni yemunhu, zita rakazara kana kero. Iwe haugone kuagovera sezvaunoda pasina mvumo yeane hanya. Iko kudzivirira kushungurudzwa kwese kwemutemo uye nekutonga uko "ICC" inoshandiswa. Uye zvakare, inogona kunge iri nyore maneja chishandiso chinokutendera iwe kuti uve nedata rakaparadzana kubva kune vakati wandei vatengesi pasina ivo vachitaurirana. Izvi zvakafanana kune vashandi vakati wandei, vatengi vakati wandei, nezvimwe.
Kubva pamaonero ebhizinesi chete, kutumira maemail akawanda pasina kushandisa "BCC" kunogona kupa makwikwi ako dhatabhesi pandiro yesirivha. Ivo vanozongofanira kudzoreredza email kero dzevatengi vako uye vatengesi. Kunyange vanhu vane hutsinye vanogona kuba ruzivo rwemhando iyi kuitira kunyengedza. Nekuda kwezvikonzero izvi zvese, kushandiswa kwe "CCI" kunenge kumanikidzirwa kune nyanzvi.
Shandisa CCI zvakanaka mune email January 11th, 2022Tranquillus
pashureKufungisisa uye mushonga muna 2021: kurumbidza kwekutarisira?
zvinoteveraNhanganyaya kune Statistics naR
Nzira yekunyora sei zvinobudirira kubasa?
Semuenzaniso tsamba yekumubhadharira mubhadharo
Bulleted runyorwa uye kuverenga
Gadzira chirongwa chakanaka chekunyora kubasa